Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Daniele Rugani Childhood Story Plus Ihe Mere Uweld Biography Eziokwu
Edemede anyị na-enye gị mkpuchi zuru ezu nke Daniele Rugani Akụkọ gbasara nwata, ndụ, ndụ ezinụlọ, nne na nna, ndụ mbụ, ụdị ndụ, enyi nwanyị, ndụ onwe onye, ​​na akụkọ ndị ọzọ ama ama sitere na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Oge ndụ Daniele Rugani na mbili. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram na DailyMail.
Ee, onye ọ bụla maara na ya abanyela ozi ọma n'otu oge maka ebumnuche na-ezighi ezi maka ịbụ onye egwu izizi nke Serie A mbụ butere ọrịa Coronavirus na-egbu egbu nke a makwaara dị ka Covid-19.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ gbasara Daniele Rugani Biography, nke kachasị nke Nwata ya nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a, na-enweghị ọkwa ọzọ, ka anyị bido, buru ụzọ jiri tebụl ọdịnaya anyị tupu akụkọ zuru ezu.
Daniele Rugani's Akụkọ nwata:
Na-amalite, a na-akpọ ya “Daje Dani“. Daniele Rugani mụrụ na 29th ụbọchị nke July 1994 na nne ya, Lia Rugani na nna, Ubaldo Rugani n'obodo Lucca na Central Italy. Onye egwuregwu bịara n'ụwa dịka nwa nke abụọ nke ụmụ abụọ, mụrụ nke nne na nna ya mara mma.
N'amaghị ama dịka onye mba Italiantali, Young Daniele toro na Ponte onye Moriano agbata na Lucca obodo nwere ịhụnanya sitere na nne na nna ya na nwanne ya nwoke nke okenye mara dịka Simeone. N'okpuru ebe a bụ foto nke otu n'ime ndị mụrụ Daniele Rugani- ọ bụ nna ya kachasị mma nke a hụrụ ka ọ na-agbakọ ma ya na nwanne ya nwoke nke okenye.
Daniele Rugani toro na nne na nna ya na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya n'anya. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
N'ịbụ onye toro na Ponte nke Moriano, Rugani na-eto eto bụ nwa na-enweghị nlekọta ma na-ahụ n'anya nke nwere ọtụtụ ebumnuche mbụ sitere na ịgba bọl na tenis n'anya ice-cream na igwu mmiri. N’inwe nna nwere mmasi n’egwuregwu, ọ dịịrị Daniele mfe isonye n’egwuregwu ndị a.
Ihe ndabere ezinụlọ Daniele Rugani:
Otu n'ime mmasị egwuregwu Rugani, nke kachasị metụtara egwuregwu tenis bụ egwuregwu nke nwatakịrị ya na ụfọdụ n'ime ndị enyi ya gbara na-arụ ọrụ nwa oge.
N'aka nke ọzọ, ịhụnanya Rugani maka football karịrị ihe omume enyi, ọ bụ n'eziokwu, egwuregwu ezinụlọ. Ị maara?… Ndị nne na nna Daniele Rugani (nke a na-ese n'okpuru) bụ ndị egwu siri ike nke Juventus, iguzosi ike n'ihe nke Rugani mere nke ọma iketa.
Zute ndị mụrụ Daniele Rugani. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Mmụta Daniele Rugani na Ọrụ Buildup:
N'ime egwuregwu niile, ọ bụ ịhụnanya maka football jupụtara na ya. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ịtụnanya na nwatakịrị Rugani dị obere ga-amalite ịtọ ntọala nke ọrụ ya na ụlọ akwụkwọ egwuregwu klọb nwoke. Atletico Lucca. Mgbe ọ dị afọ isii (afọ 6), nwata ahụ nwere ọ saidụ gwara ọsịsa ya n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ izizi ya ka ọ wee nwee ike ibute nsogbu dị iche iche.
Atletico Luca bụ ebe egwuregwu asọmpi bidoro maka egwuregwu bọọlụ. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
N'ịga n’ihu, Rugani bidoro ịrụ ọrụ n ’ụlọ ọrụ ntorobịa nke Empoli bọọlụ. N'ebe ahụ, ọ nọrọ ihe karịrị afọ iri nke ọrụ ntorobịa ya (2000-2011) ịzụlite nkà ya nke bụ akụkụ nke ụdị egwuregwu ya ugbu a.
N'afọ ndị mbụ na Juventus:
Ka ọ na-erule oge Rugani gbara afọ 18 n’afọ 2012, Empoli nyefere ya n’aka ndị Juventus maka ịgbazinye ego na ndị otu abụọ na-edebe taabụ etu ndị mmegide na-agbachitere si gosipụta ọhụụ dị mma maka ndị Old Lady's Primavera (ndị na-erubeghị afọ 20) ndị ntorobịa.
Nwa nwoke a mere nke ọma dị ka onye na-agba bọl na ụlọ akwụkwọ. Nke kachasị, ọ ,ụ nke ndị otu Daniele Rugani amabeghị oke n'oge o nyeere ndị ntorobịa Juventus ya aka inwe mmeri Coppa Italia Primavera n'oge mpụta mpụta mbụ ya (2012 - 2013).
Foto ochie a na-agbadata n'ehihie mana ncheta nke imeri aha Coppa Italia Primavera ga-adịgide ndụ n'uche onye na-agbachitere ya. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Rugani gosipụtara na asọmpi ahụ mere ka Juve gbaghara nsogbu niile na itinye aka na Empoli maka onye na-agbachitere ọfụma.
Tozọ Gara Akụkọ Banyere Akụkọ Ndụ:
Mgbe ọnọdụ nke nkwekọrịta nwekọ nkwekọrịta, Juventus zigara Rugani ka ọ laghachi na Empoli tupu oge mgbasa ozi nke 2013-14 Serie B, na-enye ya ohere igosipụta na ya ruru eru ịbụ atụmanya nke ndị Juventus nwere ike zụta kpamkpam.
Ọ hụrụ na enwere ohere ka enyeghachi ya ọzọ na Empoli ma jiri ịdị uchu chọọ ya kachasị. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ọ dabara nke ọma, Rugani mere nke ọma n'ịtụgharị ohere ahụ ka ọ gbanwee oge ọrụ ya dịka onyinye ya na usoro nchekwa Empoli hụrụ klọb ahụ gwụchara nke abụọ na Serie B ma nweta nkwalite akpaka na Serie A n'akụkụ Palermo nke bịara na mbụ.
Na-ebili Iji Mara Akụkọ Ndụ:
Rugani, na oge ọkọchị nke afọ 2015 laghachiri na Juventus nke afọ 2015 mgbe ọ nọrọ otu oge iji nweta ahụmịja football na Empoli. Nke ahụ kara akara oge ọrụ ọkwa izizi ya site na inyere otu aka inwe mmeri nke Serie A. Rugani gara n'ihu bụrụ onye na - agbachitere isi maka klọb ọfụma Leonardo Bonucci hapụrụ Milan na 2017.
Ngwa ngwa n'oge edere Daniele Rugani's Biography, a na-ekwu na onye na-agbachitere ya nwetara ntị zuru ụwa ọnụ BỤGHỊ maka ikike ịgbachitere ya mana maka ịbụ onye ọkpụkpọ mbụ na Serie A ịbanye na coronavirus makwaara dị ka Covid-19.
N'ihi nke a, onye na-agbachitere ahụ anọla n'echiche na ekpere nke ndị ọkpọ na ndị nta akụkọ na-eji ndidi na-eche ntisa ozi banyere mgbe ọ ga-enwere onwe ya pụọ ​​na nje ahụ wee laghachi n'ọhịa.
Ọrịa ọjọọ na ntanetị nkwenye sitere na Juventus mere ka onye na-agbachitere ikpe zuru ụwa ọnụ. Ebe E Si Nweta Foto: DailyMail.
Nwanyi Daniele Rugani, Nwunye na umuaka:
Site na mmụba ya na-ewu ewu na-enweta nlebara anya ụwa niile maka ihe na-ezighi ezi, enweela ọtụtụ nyocha banyere ndị na-agba ụkwụ. Otu n'ime ajụjụ ndị ahụ metụtara onye nwanyị Daniele Rugani nwere ike ịbụ.
Mgbe anyi mechara nyocha nke anyị, anyị weputara na onye na-agbachitere ya nwere enyi nwanyị nke bụ ego ugbu a na oge, ọ ga-abụ nwunye ya.
Daniele Rugani na enyi ya nwanyị na-ele anya zuru oke. Ọ bụghị ha?
Rugani bụ ihunanya nwoke na nwanyị ya nwanyị gbara akwụkwọ, Michela Persico. The lovebirds - ndi enweghi nwa nwoke - zutere tupu 2016 na egwuregwu tennis nke Michela na-ekpuchi dị ka onye odeakụkọ egwuregwu.
N'ịchọ ịbụ onye odeakụkọ egwuregwu, Michela bụ onye na-eme ihe nkiri na Tv nke nwere ọmarịcha ịma mma nke kwụsịrị ịchọ Rugani n'ịchọ ụmụ agbọghọ ọhụụ. Dika nkpuru obi ya, o nwalere ihe oma ma coronavirus ma ihe di iche di nma na akwado duo na agbake.
Ọzọkwa n'oge a na-ede ihe, enwere akụkọ na-agbaji site na NyeMeSports na Daniele Rugani enyi nwanyị na nwunye ọ ga-abụ (Michela Persico) dị ime ugbua ọbụlagodi mgbe ọ butere nje ahụ. Ọbụnadị n’oge a nke ejighi n’aka, ka anyị nwee olile anya ya, ya bụ, Michela Persico, na nwa ahụ ga-enwe ahụ ike ma ghara inwe nje a.
Ndụ Daniele Rugani:
Ndị agbachitere ịtụnanya na-enwe ihe ịga nke ọma nke njem ha na football maka ezinụlọ na-akwado ya na ezinụlọ Rugani abụghị ihe a. Na ngalaba a, anyị ga-ewetara gị akụkọ gbasara ndị otu Daniele Rugani na ndị ezinụlọ ya malitere.
Banyere Daniele Rugani Nna:
Nna Rugani, Ubaldo bụ onye na-anụ ọkụ n'obi nke Juventus yana onye na-agba ịnyịnya ígwè bụ onye bụbu onye mmeri ndị Italia ugboro abụọ. Ọ bụ - n'oge edere - onye nnọchi anya nke ihe azụ, yana ezigbo nna na nwa ya nwoke na-eme ka ọ dị elu mgbe ọ bụla ịbụ onye Juventus na-akwado ya.
Youhụla foto ochie nke Daniele Rugani ya na nna ya Ubaldo?
Banyere mama Daniele Rugani:
Mama Rugani Lia bu onye nkuzi ulo akwukwo nke gbara okpukpu abuo dika onye nkuzi omume ya. Ọ naghị akwụsị ịgwa onye na-agbachitere ka ọ lekwasị anya n'egwuregwu ya wee gbochie echiche ọjọọ nke ụdị egwuregwu bọọlụ mara. Gịnị ọzọ? ọ bụ onye nkuzi nke Juventus na nke nwere mmasị na ya.
Daniele Rugani na nne ya Lia nwere ezigbo oge. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Banyere Daniele Rugani nwanne:
Daniele Rugani nwere naanị nwanne nwoke tọrọ ya nke a maara dịka Simeone. Agbanyeghị na ọ bụghị onye na-agba bọọlụ, nwanne nwoke nke okenye nwere mmasị na football ma hụkwa ya ka ọ na-eme ememe mmeri Rugani n'ọtụtụ oge.
Zute nwanne Daniele Rugani na-eme otu n'ime ndị gbachitere ọtụtụ mmeri. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Banyere Daniele Rugani:
Azụ ezinụlọ Daniele Rugani, a maghị ọtụtụ ihe banyere usoro ọmụmụ ya na usoro ezinụlọ ya. Karịsịa dị ka ọ na-emetụta nne na nna ya na nna ya. N'otu aka ahụ, enweghị ndekọ banyere nwanne nna nna ya, nwanne nna ya na nwanne mama ya. Mmepe ahụ na-agafe bọọdụ maka ụmụ nwanne nwanyị na ụmụ nwanne agbachitere.
Knowmaara na Rugani gosipụtara ụdị àgwà ndị ahụ bụ njirimara nke ndị mmadụ akara zodiac bụ Leo? Ọ nwere nsọpụrụ, maa mma, dị obi umeala, onye dị uchu, nwee oke agụụ ma nwee oghere ikpughe eziokwu banyere ndụ ya na nke onwe ya.
Ihe omume Rugani na-eme dị ka ihe na-amasị ya na ihe omume ntụrụndụ ya bụ ịgba ígwè, ịkụ azụ, ịkụ tenis, ige egwu, egwuregwu, njem, igwu mmiri na iso ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nwee oge dị mma.
Anyị na-enwe obi abụọ ma ọ jidere azụ buru nnukwu ibu dị otú ahụ n'onwe ya. Ka o sina dị, anyị enweghị obi abụọ banyere ike ya ijide ndị dị obere. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu Ndụ Daniele Rugani:
Na ngalaba a, anyị ga-agwa gị otu onye na-agbachitere si eme ma mefuo ego ya. Eziokwu bụ, n'oge a na-ede Daniele Rugani's Biography, ọ nwere ọnụ ahịa ruru nde $ 39.
Isi iyi nke akụ na ụba onye agbachitere sitere na ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọrụ ọ na-enweta maka egwuregwu bọl-elu dị elu ebe nkwenye na-enye oke ego na ego ya. Site na ego ndị a, Rugani nwere ike ibi ndụ okomoko nke ndị isi egwuregwu bọọlụ na-enweghị nsogbu ịre nnukwu ego dị ka ụgbọ ala na ụlọ.
N'agbanyeghị oke uru ya bara na uru ahịa ya, onye na-agbachitere na-ahọrọ ibi ndụ dị ala ebe a ka hụbeghị ya ka ọ na-anya ụgbọ ala ndị mara mma. Na mgbakwunye, ọnụahịa ụlọ o bi na enyi nwanyị ya amabeghị.
Ọ dị mfe ịhụ Daniele Rugani na onye chọrọ ịlụ ya ka ha na-ekpori ndụ n'ịnyịnya, karịa na ụgbọala ndị nkịtị. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Iji chịkọta akụkọ gbasara nwa anyị Daniele Rugani na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ obere ama ama ma ọ bụ eziokwu a na-amaghị ama banyere onye na-agbachitere ya.
N'ezie #1: Daniele Rugani si na Mbelata ụgwọ ọnwa:
Na 30 Mach 2019, Rugani gbatịpụrụ nkwekọrịta ya na Juventus, na-edebe ya na klọb ahụ ruo na June 2023. Nkwekọrịta ọhụrụ a mụbara ọnụ ahịa ya, akara nke hụrụ ya na-etinye ego na-akwụ ụgwọ gburugburu. € 3.1 nde kwa afọ. Akingkagbu ụgwọ ọnwa Daniele Rugani n'ime obere, anyị nwere ndị a.
Ngota ya na Euro (€)
Nzụta ya na Pound Sterlings (£)
Nweta ya na dollar ($)
Ihe ọ na-enweta kwa afọ € 3,172,000 £ 2,863,459 $ 3,407,235
Ihe ọ na-erite kwa ọnwa € 264,333 £ 238,621 $ 283,936
Ihe ọ na-enweta kwa izu € 61,000 £ 59,655 $ 70,984
Ihe ọ na-enweta kwa ụbọchị € 8,714 £ 8,522 $ 10,140
Ihe ọ na-enweta kwa elekere € 363 £ 355 $ 422.52
Ihe ọ na-enweta kwa nkeji € 6.05 £ 5.91 $ 7.04
Ihe ọ na-enweta kwa sekọnd € 0.10 £ 0.09 $ 0.11
Nke a bụ ole Daniele Rugani eritela uru kemgbe ị malitere ile Peeji a.
Ọ bụrụ na ihe ị hụrụ n’elu na-agụ (0), ọ pụtara na ị na-elele ibe AMP. ugbu a Pịa EBE A ịhụ ụgwọ ọrụ ya na-abawanye na sekọnd.
Ị maara?… Onye ọrụ gbata gbata na needstali kwesịrị ịrụ ọrụ opekata mpe 5.9 afọ iji rite ego € 264,333 nke bụ ego Daniele Rugani na-enweta n'otu ọnwa.
Eziokwu nke 2: Daniele Rugani FIFA Rating:
Onye na-agbachitere nwere ezigbo ọkwa FIFA nke 82. Ogo nke bụ mkpokọta ike Rugani na ikike ya na-ekpughe ebe onye agbachitere abịaruterịrị na ọ ka nwere ike nweta ogo 85.
O toro n'otu nkịta ahụ n'ezie? Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ogbugbu: Rugani enweghị igbu egbugbu n'oge a na-ede akwụkwọ ma ọ nwere ike ọ gaghị enwe nkà n'ahụ maka ọrụ ya niile. Dịka onye na-agbachitere ya, ọ na-ebute ụzọ inwe nnukwu ahụ arụ - nke dakọtara n'ịdị elu nke 6 ụkwụ 3 sentimita atọ - karịa ịchọ ahụ mma.
Daniele Rugani forhụnanya maka anu ulo ebe ọ bụ nwata:
Rugani abụwo onye ukwu na anụ ụlọ ọkachasị nkịta kemgbe ọ bụ nwata rue ụbọchị. Enwere ike ịhụ ya n'okpuru ebe ya na anụ ụlọ na-enwe ọ goodụ nke ọ na-ewere dị ka ezigbo ndị enyi ya.
Okpukpe Daniele Rugani:
Eleghị anya, ndị mụrụ Daniele Rugani zụlitere ya na nkwenye okwukwe okpukpe Katọlik nke Katọlik. Ị maara?… Aha "Daniele" bu aha Ndi Hibru nke putara “Chineke bu onye ikpe m“. N'ịmara nke ahụ, ọdịmma dị ukwuu maka ndị ezinụlọ Daniele Rugani bụ Ndị Kraịst.
Daniele Rugani Trivia Eziokwu:
Mara n’afọ 1994 abụghị naanị ihe dị mkpa maka afọ ọmụmụ Rugani? Ọ bụ n’afọ ahụ ka PlayStation bidoro ihe njikwa mbụ ya. Na mgbakwunye, 1994 hụrụ mwepụta nke ihe nkiri kpochapụwo dị ka Forrest Gump. Ọzọkwa, mgbapụta Shawshank na ihe nkiri Disney's Lion King wakporo sinima n’afọ ahụ.
Lee ihe omume ndị mere ka ọmụmụ Daniele Rugani afọ (1994) bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ebe E Si Nweta Foto: NME.
Ikpeazụ, na Daniele Rugani's Biography Facts, anyị na-ewetara gị wiki knowledgebase ya. Tebụl dị n'okpuru ga - enyere gị aka ịchọta ihe ọmụma banyere ya n'ụzọ dị nkenke ma dị mfe.
Daniele Rugani Biography Eziokwu
Aha n'uju: Daniele Rugani.
aha otutu: Daje Dani.
Andbọchị na afọ: 29 Julaị 1994 (afọ 25 dị ka ọnwa Machị 2020).
Ebe amụrụ onye: Lucca, Italytali.
Ndị nne na nna: Ubaldo Rugani (Nna) na Lia Rugani (Nne).
Ụmụnne: Simeone Rugani (Nwanne ndị okenye).
Nwa nwanyi: Michela Persico (Fiance na nwunye ya ga-abụ).
elu: 1.90 m (6 ft 3 na).
arọ: 84 n'arọ.
-arụ: Onye na-agba ụkwụ (etiti azụ).
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Daniele Rugani Childhood Story Plus Ihe Mere Uweld Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.
Ciro Immobile Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Bọchị agbanweela: Septemba 26, 2020
Bọchị agbanweela: Septemba 25, 2020
Bọchị agbanweela: Septemba 23, 2020
Bọchị agbanweela: Septemba 19, 2020
Ifiedbọchị agbanwee: November 9, 2017
Bọchị gbanwee: Mee 26, 2019